चार्ल्स टेक्स वाटसन र मनसन परिवार
चार्ल्स "टेक्स" मानस परिवार को वाटसन को प्रोफाइल
चार्ल्स म्यानसनको दायाँ हात हात र हत्या मिसिन
चार्ल्स "टेक्स" वाटसन चार्सन म्यानसनको दाहिने हात र ठंडे खूनी हत्यारा हुनको लागी उनको टेक्सास हाई स्कूलमा "ए" विद्यार्थी बनेको थियो। उनले टेट र लाबियाका निवासहरूमा दुवैको हत्याको नेतृत्व गरे र दुवै परिवारका प्रत्येक सदस्यलाई मारेर भाग लिइन्। सात व्यक्तिको हत्याको दोषी पाए, वाट्ससन अब आफ्नो जिवनको जेलमा बस्दै हुनुहुन्छ, उहाँ एक सभापति सेवक, विवाहित र तीन जना बुबा हुनुहुन्छ, र दावी गर्नुहुने उनीहरूको लागि पछ्याउने पश्चात्ताप छ।
चार्ल्स वाटसनको बचपन वर्ष
चार्ल्स डेंटिटन वाटसन डम्बर, टेक्सासमा29 डिसेम्बर, 1945 मा जन्मिएको थियो। उहाँका आमाबाबुले कोपेल, टेक्सास, सानो सानो शहरमा बसेका थिए जहाँ उनीहरूले स्थानीय ग्यास स्टेशनमा काम गरे र चर्चमा बिताए। वाट्सन्सले अमेरिकी सपनामा विश्वास गरे र तीन जना बच्चाहरूको लागि राम्रो जीवन प्रदान गर्न गाह्रो काम गरे, जसमा चार्ल्स सबैभन्दा सानो थियो। उनीहरुका जीवन आर्थिक रूपमा अलिकति थिए, तर तिनीहरूका छोराछोरीहरू खुसी थिए र सही बाटो पछ्याउँदै थिए।
प्रारम्भिक किशोर र कलेज वर्षहरू
जस्तै चार्ल्स ठूलो भयो उनी आफ्ना आमाबाबुको चर्चमा सम्मिलित भए, कोपविले मेथोटिस्ट चर्च। त्यहाँ उनले चर्च युवा समूहको लागि भक्तिहरूको नेतृत्व गरे र नियमित रूपमा आइतबार राती प्रचारकार्य सेवाहरूमा भाग लिनुभयो। उच्च विद्यालयमा, उनी एक सम्मानित विद्यार्थी विद्यार्थी थिए र एक राम्रो खेलाडी थिए र उच्च पङ्क्तिहरूमा रेकर्ड तोडेर स्थानीय ट्र्याक स्टारको रूपमा प्रतिष्ठा कमाई। उनले स्कूल पेपरको सम्पादकको रूपमा काम गरे।
वाटसनले कलेजमा भाग लिने निर्णय गरे र पैसा बचत गर्न प्याज प्याकिङ संयंत्रमा काम गरे। आफ्नो सानो गृहनगरमा बस्न उहाँमा बन्द हुन थाल्नुभयो र घरबाट 50 मिटर टाढा महाविद्यालय भ्रमण गरेर स्वतन्त्रता र स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने सोच अपील थियो। सेप्टेम्बर 1964 मा, वाटसन डेंसन, टेक्सास गए र उनको पहिलो वर्ष उत्तरी टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी (एनटीएसयू) मा सुरु भयो।
उनको आमाबाबुले आफ्नो छोरालाई गर्व गर्थे र वाटसन उत्साहित भए र उनीहरूको नयाँ स्वतन्त्रताको आनन्द उठाउन तयार थिए।
कलेज अकादमीले चाँडै दिक्कतहरुमा जाने कोसिस गर्यो। वाट्ससनले आफ्नो दोस्रो सेमेस्टरमा पे काप्पा अल्फा बिराटनगरमा सामेल हुनुभयो र उनको ध्यान सेक्स र शराबमा पुग्यो। उनले केहि भाइरस शरारतहरुमा भाग लिई, अरू भन्दा बढी गम्भीर। एक चोरी मा संलग्न थिए, र उनको जीवन मा पहिलो पटक को लागि, उनले कानून तोड दिए स्वीकार गरेर आफ्नो आमाबाबु निराशाजनक थियो। उनको आमाबाबुको व्याख्यानले क्याम्पस मजालाई फिर्ता लिन आफ्नो इच्छा रोक्न असफल भयो।
विटसनको औषधिको पहिलो एक्सपोजर
जनवरी 1967 मा उनले ब्रेनफिल एयरलाइन्समा सामान सामानको रूपमा काम गर्न थाले। उनले नि: शुल्क एयरलाइन टिकटहरू कमाएका थिए जसले उनले डलास र मेक्सिकोमा सप्ताहांत भ्रमणका लागि आफ्नो प्रेमिकालाई प्रभाव पार्न थाले। उसले टेक्सासबाट संसारको लागि स्वाद पायो र उसले मन परायो। लस एंजेल्समा एक भाइरस भाइको घरको भ्रमणको क्रममा, वाटसन ड्रग्स र मुक्त प्रेमको मनोरोग वातावरणमा लिइएको थियो जसले 60 वर्षको अवधिमा सूर्यास्त पट्टीमाथि कब्जा गर्यो।
अगस्त 1967 सम्म, आमाबाबुको चाहना विरुद्ध, वाटसन NTSU छोडे र कुल स्वतन्त्रताको लागि थियो - लस एन्जलस। आफ्नो आमाबाबुलाई कलेज पढ्नको लागि प्रतिज्ञा राख्न को लागी उसले व्यवसाय प्रशासनमा क्याल स्टेटमा कक्षाहरुमा भाग लिन थाल्यो।
कलरर हिप्की को लागी उनको पोर्टेबल फ्रेट कपडाहरु फिसलिएका थिए र उनको पसंदीदा "उच्च" रक्सी देखि मारिजुआना सम्म बदल्यो। वाटसनले समूहबाट भाग लिन थालेका थिए जसले आफैले स्थापना गरे र उनीहरूलाई स्वीकार गरे।
त्यहाँको महिना भित्र, वाटसनले विग बिक्रेताको रूपमा काम गरे र क्यालेस्ट स्टेटबाट निस्क्यो। त्यो पट्टी पछि एक घर मा पश्चिम हॉलीवुड र त्यसपछि लाउरेल क्यानन गर्न गए। उनको आमालाई एक गम्भीर कार दुर्घटनामा चोट लागेको थियो एक पटक पछि भेट्न आए। आफ्नो जीवनशैली संग असहमति, उनले उसलाई टेक्सास फर्कन आग्रह गरे र तिनीहरुको भाग आफ्नो गृहनगरमा फर्कन चाहन्थे, गर्वले उसलाई जाने देखि राख्यो। उहाँले फेरि फेरि देख्नुहुने छैन जबसम्म सातजना व्यक्तिको हत्याको लागी त्यो दौडमा थियो।
वाटसन मार्जुआना व्यवहार गर्न थाले र उनले र उनको रूममेटले प्रेम प्रेमको नाममा एक विग पसल खोल्यो।
यो चाँडै बन्द भयो र वाटसनले नयाँ माल्बु सुन्तला घरको लागि दबाउने व्यवहारमा डन गर्न थाले। तिनको चाहना पैसा कमाउन चाँडै उच्च हुनु चाहान्छ, रक कन्सर्टमा जानुहोस् र समुद्र तटमा राख्नुहोस्। उनले अन्ततः तिनले पूर्ण-समय हिप्पी सोचेमा विकसित गरे र उनले विश्वमा आफ्नो स्थान पाएको महसुस गरे।
सधैंभरि उहाँको जीवन परिवर्तन गर्ने सभा
वाट्ससनको जीवन एक हप्तौकिक छनौट पछि सदाको लागि परिवर्तन भएको थियो जो डान्स विल्सन, समुद्र तट केटाहरुका चट्ट समूहको सदस्य थिए। विल्सनको प्यासिफिक पालिसेड हवेलीमा आइपुग्दा विल्सनले घर हेर्नको लागि वाट्ससन माथि निमन्त्रणा गरे र त्यहाँ बाहिर फाँसिने व्यक्तिहरूलाई भेट्न।
उनी डीन मोरहाउस, पूर्व-विध्वंसवादी सेमिफाइनल र चार्ली म्यानोन सहित विभिन्न मान्छेलाई परिचय दिइयो। विल्सनले पटक्कै र ओलम्पिक आकारको पूलमा तैर गर्न कुनै पनि समयमा हतियारमा फर्कन वाट्ससनलाई निम्तो पठायो।
हवेली ड्रपआउटहरू भरिएको थियो जसले ड्रग्स गरिरहेको र संगीत सुनेका थिए। वाटसन अन्तमा हवेलीमा जानुभएको थियो जहाँ उनी रक संगीतकारहरू, अभिनेताहरू, ताराहरूका सन्तानहरू, हलिवुड निर्माताहरू, चार्ली म्यानोन र म्यान्सनका "प्रेम परिवार" सदस्यहरूसँग जोडिएका थिए। उनको आफुलाई प्रभावित भयो, टेक्सासका केटाले प्रसिद्ध व्यक्ति संग कुच्याउन र उहाँलाई मनोनन र तिनको परिवारमा लगाइयो, मन्सनको भविष्यवाणी र उनको परिवारका सदस्यहरू एकअर्कासँगको सम्बन्धमा लागेका थिए।
वाटसनले नियमित रूपमा हेलिक्युनिगेनहरू गरिसकेका थिए र नियमित रूपमा नयाँ औषधि-उत्तेजित परिप्रेक्ष्यमा उपभोग भएको थियो जसमा उनले प्रेम र अरूलाई गहिरो बन्धन बनाए।
उनले यसलाई "सेक्स सम्बन्धी गहिरो र अझ राम्रो सम्बन्ध" को रूप मा वर्णन गरे। " ड्यानको साथ उनको मित्रता साथै म्यानसनका "लडकियों" को साथसाथै गहिरो भएको थियो जसको कारण दुवैले वाटसनलाई आफ्नो अहंकारबाट छुट्याउन र म्यानसन परिवारमा सामेल हुन प्रोत्साहित गरे।
म्यानसन परिवारमा सामेल हुनुहोस्
विल्सनले नियमित बालबालिकाको दुर्व्यवहारको उलङ्घन गरिसकेपछि आफ्नो हवेलीमा बाँचेका नियामकहरूबाट टाढा जान थाले। उनको प्रबन्धकले डीन, वाट्सन र अरूलाई त्यहाँ बस्न भने कि उनीहरूलाई पछाडि पर्थ्यो। त्यहाँ जाने को लागी, डीन र वाटसन चार्ली म्यान्सनमा फर्किए। स्वीकृति तत्काल नहीं था, तर समय मा वाट्ससन को नाम चार्ल्स देखि "टेक्स" सम्म बदलयो, उनले चार्ली को सबै सम्पत्तिहरु लाई बदले र परिवार संग चले गए।
नवंबर 1968 मा टेक्सले मानसन परिवार छोड्यो र हलिवुडमा उनको प्रेमिका, लुल्ला संग गए। दुवै आर्थिक रूपमा सहज औषधी औषधीदार थिए र टेक्सले अझ सुन्दर स्टाइलिश हलिवुडको लागि आफ्नो गन्दा हिप्पी छवि परिवर्तन गर्यो। जो जोडीको सम्बन्ध अलग भयो, टेक्सको मनसन परिवारसँग पुन: पेश गर्न चाहियो। मार्च 1949सम्म उनी स्पाहा Ranch मा र आन्तरिक मानसन सर्कलमा फर्किए। तर पारिवारिक फोकस केहि चीज मा बदलिएको थियो - केहि परिवार को "हेल्टर स्केलटर" भनिन्छ।
10050 Cielo ड्राइव
धेरै महिनाको लागि, म्यानसनले लामो समय बिताएपछि हेटटर-स्केलटरको बारेमा कुरा गर्दै। तर क्रान्तिलाई चाँडै म्यानसनको लागि पर्याप्त हुदै थिएन र एक चीजको सुरुवात चीजमा पुग्यो। 8 अगस्त 1949मा हेल्टर-स्केल्टरको पहिलो चरण सुरु भएको थियो। म्यानसन ले टेक्स परिवार परिवार को प्रभारी मा - सुसान एटकिन्स , पेट्रीसिया क्रेनेनकलल र लिंडा कासाबियन ।
उनले टेक्सलाई 10050 क्रिओ ड्राइभमा जान र घर भित्र सबैलाई मार्न, यो खराब लगाउँछन्, तर सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा निश्चित गर्नुहोस् कि प्रत्येक केटीले सहभागिता गरे।
वटसनको नेतृत्वमा, चारले अभिनेत्री शेरोन टेट-पोलस्कीको घर प्रवेश गरे। एकपटक उनीहरूलाई क्रूर रूपमा हराएपछि, सबै हत्याराहरू घरभित्र भित्र आठ महिना गर्भवती शेरोन टेट लगाए, जसले आफ्नो बच्चाको जीवनको लागि अनुरोध गरिरहेको थियो र उनको आमालाई 15 पटक चोटेका थिए। साथै गोली मारिएको 18 वर्षीया स्टीवन अर्ल आमाबाबुलाई गोली हानिएको थियो, जसले क्यारियरको भ्रमण गरिरहेको थियो र म्यानसन समूहले पकडिरहेको थियो जुन उनी निवासमा बसिरहेका थिए।
अर्को दिन मननसन, वाटसन, पेट्रिया क्रेनविन्केल , लेस्ली भ्यान हाउन्टेन र स्टीव ग्र्रोगनले लियोनो र रोजेमरी लाबियानका घर फर्केका थिए। म्यानसन र वाटसनले घरभित्र प्रवेश गरे र जोडे जोडे, त्यसपछि म्यानसनलाई बायाँ र क्रेनविंकेल र भ्यान हाउन्टेनमा पठाइयो। तीन चोटी र लियोनो ले उनको पत्नी रमाइमी। त्यसपछि उनी रगतमा पर्खालहरूमा हिंडेका शब्दहरू, "हेकलटर स्केल्टर" (साइक) र "सुँगुरलाई मार्नुहोस्"। म्यानसनले मार्न को लागी आदेश जारी गरेका थिए तर मारिनु अघि बायाँ।
डोनाल्ड "छोटो" शीटा
16 अगस्त, 1968 मा, Cielo ड्राइव हत्याका क्रममा केवल आठ दिन पछि, प्रहरीले स्प्यान रन्च मार्फत र स्वतन्त्र चोरीको आरोपमा धेरै सदस्यहरुलाई गोल गरे। आक्रमण पछि परिवारले मृत्यु घाटीको नेतृत्व गरे, तर मानन, वाटसन, स्टीव ग्र्रोगन, बिल वान्स र लैरी बेलीले खेतको हात डोनाल्ड "छोडी" शिवालाई मारेको थिएनन्। म्यानसनले विश्वास गरे कि शिया एक आक्रमण र आक्रमणका लागि जिम्मेवार थिए।
मानसन परिवार छोडेर
वाटसन 1949191 को सुरुवात सम्म मानसन परिवारसँग बसेर त्यसपछि टेक्सास फर्किने निर्णय भयो। तर नाटकीय परिवर्तनले पहिलो पटक 1964 मा घर छोडेपछि उनले पाँच वर्ष पछि कोसिस गरेन कि यो रहन गाह्रो भयो। तिनले मेक्सिकोमा जाने निर्णय गरे तर चार्ली र तिनको वास्तविक परिवारमा फर्किने बलियो पुल महसुस गर्यो। त्यसपछि उसले लातिर उड्यो र पारिवारिक रहनको लागी नजिकको बाटो बनायो, तर छोटो रोकियो किनकि उनले विश्वास गरे कि चार्लीले उसलाई मार्न भने भने।
वाटसन टेक्सासमा आफ्नो परिवार फर्किनुभयो, मात्र यो बेला उनले आफ्नो कपाल काटेर आफ्नो अज्ञात पारिवारिक संसारमा मिश्रण गर्न खोजे। उनले एक पुरानो प्रेमिकासँग पुनः गुमाएका थिए र उनको लागू औषधि प्रयोग कम भयो। भविष्यले आफ्नो पुरानो जीवन फर्काउने भागहरूको साथमा इन्चको एक इन्च देखाउन थाल्यो। त्यो सबै 30 नवंबर 1949को रोकियो पछि उनी टाट र लाबियानका हत्याको आरोप लगाए र हत्याको सात गन्तीको आरोप लगाए, उनको आमाले वर्षौंदेखि स्वीकार र विश्वास गरे।
टेक्स वाटसन चार्ज गरिएको सात मृतकहरू
म्यानन परिवारका केही सदस्यहरूले लास एन्जलसमा द अफिस अफ द अफिस अफ द म्याच अफ द म्याचको हत्या गरेका थिए जुन उनीहरूले सचेतनाको पछि लागेका थिए। तर सुसान (साडी) अटकिन्स थिए जसले मसन परिवार र हत्याको बारेमा घृणा गर्न सकेनन्। जबकि लस एंजिल्स मा महिलाहरुको सिबिल ब्रान्ड संस्थान मा। पछि उनले एकै स्टोरीलाई भव्य जूरीमा बोलाए र हत्यामा वटसनको संलग्नता वर्णन गरे। यो लामो समयपछि टेक्स टेक्सासमा अवस्थित थियो र गिरफ्तार गरिएन।
9 महिना 1970 को क्यालिफोर्निया फर्किदा प्रत्युत्तर फिर्ता लिने क्रममा उनीहरूलाई सेप्टेम्बर 11, 1970 मा फर्काइएको थियो। यस समय म्यानसन, साडी, केटी, र लेस्ली परीक्षणको तेस्रो महिनामा थिए। विष्फोट प्रक्रियाले विटसनलाई समूहसँग प्रयास गरिरहेको छ। यो टेक्सलाई पनि मौका पाउन को लागी को लागी दोषी को लागी दोषी को लागी को लागी अनुमति दिइएको थियो त्यसैले जब उनी आफ्नो परीक्षणको लागि समय आए, उनीहरुलाई स्वीकार गर्न को लागी थाहा थियो र अरुलाई किन दोषी ठहराएको थियो।
क्यालिफोर्नियामा एक पल्ट, वाट्ससन तीव्र पार्न्यानियाबाट पीडित र एक भ्रूण राज्यमा दफन गर्न थाले, खाने रोकियो र 90 दिनको औसत अवधिको लागि एस्साडोरो स्टेट अस्पतालमा पठाउनुअघि 55 पाउण्ड पुगिसकेको थियो भने उनी परीक्षणमा उभिरहेका थिए। यो अगस्त 2, 1971 सम्मको थिएन, कि चार्ल्स टेक्स वाटसनले अन्ततः आफ्नो क्रूर हत्याको लागि परीक्षणमा जान्छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय विन्सेंट बगलिओसीले सफलतापूर्वक टाट-लाबेनियाका हत्यामा संलग्न अभियोग गरेका थिए र अब अन्तिमको परीक्षण सुरु गरे र सबै पार्टीका सबै भन्दा अधिक अपराधी संलग्न थिए। एक सूट मा पहने र बाइबल पकडे, वाटसन पागलपन को कारण देखि दोषी नहीं वादा गरे अझै सम्म केवल पर्याप्त अपराध थियो कि उन अपराधों को रूप मा उनि जान्दथे कि अभियोजन को पहिले नै जागरूक थियो। उनले शेरोन टेटलाई मार्न वा चार्ली संग हुँदा स्वीकार्न असफल भएन जब लाबियानका पहिलो पटक कैदी र बाध्य भए।
दुई घण्टाको छलफल पछि, चार्ल्स "टेक्स" वाटसन ट्याटे र लाबियाका घरहरूमा हत्याको समयमा समानुपातिक भेटिएको थियो। उनको अपराधको लागि उहाँले मृत्युको सजाय पाउनुभयो।
जन्मे फेरि, विवाह, पिता, लेखक
टेक्स नोभेम्बर 1971 देखि सेप्टेम्बर 1972 सम्म सैन क्वेन्टिन मा मृत्यु पङ्क्तिमा बिताईयो। क्यालिफोर्नियाले छोटो समयको लागि मृत्युदण्डको दोषी ठहराएपछि, सैन लुइस ओबिसोमा कैलिफोर्निया पुरुषको कलोनीमा सारियो। त्यहाँ उनले चैपलले रेमंड होकस्ट्रालाई भेट्टाए र एक जन्म-ईसाई मसीही बने। चार्ल्स वाटसन, निर्दोष हत्यामा पाँच वर्षपछि शीत रक्तमा पाँच वर्ष पछि, बाइबल अध्ययन पढाउँदै थियो, जसले अन्ततः तिनको आफ्नै जेल सेवकाईको निर्माण गरे - प्रेम प्रेमका शासकहरू।
कोलोनी मा रहन को समयमा उनको एक आत्मकथा जसमा 1978 मा "तिमी मेरो लागि मर्नेछौ" भनिन्छ, उनले क्रिस्टीन जोआन सिभसँग विवाह गरे र 1984 मा सुजैन स्ट्रिथर्स (रोजेमरी लाबियाका छोरी) लाई विश्वास गरे जुन 1 990को अवधिमा उनको रिहाई उनीहरुसँग भेटघाट गर्थे।
मंगलबार भ्रमणका क्रममा, उनी र तिनको पत्नी चार छोराछोरी थिए, तथापि, सन् 1 999 मा मङ्गलबार भ्रमणहरूमा जीवन बिताउने कैदीहरूका लागि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
वाटसन आज कहाँ छ
सन् 1 999 देखि उनी म्युल क्रीक राज्य जेलमा थिए। 2003 मा, उनको र उनको श्रीमति तलाक भयो। आजसम्म, त्यो पेरोल 13 पटक इन्कार गरिएको छ।
"बाग मर्फी" द्वारा "डेजर्ट छाया"
विन्सेंट बगलिओसी र कर्ट गेन्ट्री द्वारा "हेल्टर स्केलटर"
ब्राडली स्टीफन्स द्वारा "चार्ल्स मेसनको परीक्षण"
राय कार्रुथको प्रोफाइल
मारिया डेल रोलोियो अल्फारोको अपराध
इन्टरटिया र कानून विधि
एचडीआई - मानव विकास सूचकांक
न्युस्टिक प्यान्समा कसरी टेलफोन स्टिक्सहरू
Gable र The Gable Wall
सम्झौता कलेज प्रवेश
अंग्रेजी भाषामा शब्द ट्रिपलहरू
Agencias अमेरिकनस que contratan एक जोडी extranjeras
सजिलो अन्तिम-मिनेट कलेज हेलोवीन पोशाकहरू
डुकाखा: 'जीवन दुःखलाग्दो छ' द्वारा बुद्ध मन्त्र
कसरी साँप विनाश काम गर्दछ?
10 अद्भुत रासायनिक प्रतिक्रियाहरू
यहूदी र यहूदी धर्मको बारेमा शीर्ष5मिथकहरू
स्वतन्त्रताको सङ्गत को थिए?
कार्लोस गार्डेल-राजा टान्गोको जीवनी
4 छात्रवृत्ति छात्रहरू खोज्न समाजशास्त्रलाई मदत गर्न उपकरणहरू
तपाईं एक मैन्युअल ट्रामिशनमा एटीएफ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
लीक रेडिएटर कसरी मरम्मत गर्ने?
'पेडरर' प्रयोग गर्दै